आजको तस्वीर : सकियो खारबजारको न्वागी मेला ! – ebaglung.com
आजको तस्वीर : सकियो खारबजारको न्वागी मेला !
२०७६ मंसिर ७, शनिबार १८:२४	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
शव्द/चित्र : कमल पौडेल
बडीगाड (खारबजार), २०७६ मंसिर ७ । बडीगाड गाउपालिकाको खारबजारमा सुरु भएको न्वागी मेला भलिबल प्रतियोगिताको फाईनल खेल सहित आज सम्पन्न भएको छ । २०७६ मंसिर १ गते पौँदेलीहरुको विशेष पर्वको रुपमा परम्परा देखी मनाईदै आएको न्वागी पर्व सुरु भए लगत्तै ग्वालिचौर खारबजारमा लागेको स्पताहव्यापी न्वागी मेला आज सम्पन्न भएको हो ।
यस वर्षको न्वागी मंसिर १ गते विहान साढे सात बजेको शुभ साईतमा भगवान विष्णुको पूजा गरेर धार्मिक विधिपूर्वक पौँदेलीहरुले ग्रहण गरेका थिए । यसै पर्वका साथसाथै सन्चालन भएको न्वागी मेलामा खुल्ला पुरुष भलिवल, खुल्ला साँस्कृतिक कार्यक्रम, खुल्ला एकल रेकर्ड नृत्य, खुल्ला दोहोरी गीत, महिलाहरुको म्यूजिकल चेयर रेश, शैक्षिक प्रदर्शनी, खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष लुठो तान, खुल्ला सरायँ नृत्य प्रतियोगिताहरुका साथै कृषि प्रदर्शनी, रमाइलो मेला, सर्कस पीङ लगाएतका कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय नौमती बाजा, सोरठी भैलो लगायत चर्चित लोक कलाकारहरुले सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
मेलाको मुख्य आकर्षण रहेको यस क्षेत्रकै सर्वाधिक रु १ लाख २ हजार २ सय २२ राशी पुरस्कार रहेको खुल्ला पुरुष भलिवल प्रतियोगीता सनराइज युवा क्लब जुग्जाखोलाले हात पारेको छ भने उपविजेता मदन भण्डारी स्पाेर्ट क्लव काठमाडाैंले रु ६६ हजार ६ सय ६६ जितेको छ । मेलामा करीब एक करोडको कारोवार भएको आयोजकले बताएका छन् ।
गठवन्धनका उमेद्वारलाई विजयी गराउन नेता-कार्यकर्ता एक ढीक्का भएर लाग्न प्रचण्डको आग्रह !
उपनिर्वाचन अवधिभर हातहतियार लिएर हिँड्न निषेध !